| စက်ထုတ်လုပ်သူ & ပေးသွင်းခေါက် တရုတ်ခေါက်စက်စက်ရုံ
စက် TSB ခေါက် 2020/2
HOTON စက်အင်္ဂါရပ်များ FROM မှလက်စွဲစာအုပ် STEET Metal BENDER: 1. ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိကျခေါက်စက် FSMS2020 /2လေးလံသောအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ 2. ၎င်း၏အထက်ဓါးလုံးဝခေါက်နိုင်ပါတယ်။ 3. ဒီ tool ကဖွဲ့စည်းပုံ box ကို-shaped အလုပ်အပိုငျးပိုငျး processing များအတွက်သင့်လျော်သည်။ 4. ကျွန်ုပ်တို့၏တိကျခေါက်စက်ကိုယျခန်ဓာကိုတစ်ဦးသံမဏိပန်းကန်ဂဟေဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိပါတယ်။ အဆိုပါကွေးရောင်ခြည် 6. အဓိကနညျးပညာ Par ၏ဆုံလည်လှုပ်ရှားမှုများအတွက် 5. လီဗာ ...
စက် TSBS ခေါက် 2020/2
စက် TSB ခေါက် 2060/2
စက် W1.5X1500 ခေါက်
စက် W1.2X2000 ခေါက်
စက် PBB2020 / 1.2 ခေါက်
စက်အင်္ဂါရပ်များကွေး Metal: 1. သူတို့ကခြေသည်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူလက်ရုံး (optional) 2. အထဲမှာ install လုပ်ထားနိုင်သည့်လေထုနွေဦး၏ function ကိုရှိသည်, ဒါဟာစစ်ဆင်ရေးအဘို့လွယ်ကူသည်နှင့်လက်အားအနားယူ။ 3. စက် PBB Serial ခေါက်ကျွန်ုပ်တို့၏တိကျစွာတစ်ဦးနင်းဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့အိမ်မှာမူပိုင်ခွင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလျှောက်ထားခဲ့ကြသည်။ 4. ကျွန်ုပ်တို့၏တိကျခေါက်စက်ကိုစာရွက်သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများကိုကွေးများအတွက်အသုံးပြုသည်။ အထက်ဓါး ...
စက် PBB2500 / 1.0 ခေါက်
စက် W1.2X1500 ခေါက်
စက် W1.0X2000 ခေါက်
PAN AND BOX ခေါက်စက်အင်္ဂါရပ်များ: 1.For ဖွဲ့စည်းခဲ့အစိတ်အပိုင်းကွေး။ 2.A အပြည့်အဝဂဟေဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းအရည်အသွေးမြင့်အင်ဂျင်နီယာအတူတကွရိုးရှင်းပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောစစ်ဆင်ရေးနှင့်အတူနိမ့်ဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအာမခံပါသည်။ လက်ရုံးကို (Optional) အတွင်း၌ထည့်သွင်းနိုင်သည့်လေထုနွေဦး၏ function ကို 3.Have ။ 4.Adjustable 135 ° 5.With ခြေလျင်ထိန်းချုပ်မှုမှစကေးတက်နှင့်အတူထောင့်ရပ်တန့်ကွေး။ ဒါဟာစစ်ဆင်ရေးနှင့် rel များအတွက်လွယ်ကူသည် ...
စက် PBB1250 / 1A ခေါက်
စက် PBB1020 / 1A ခေါက်
စက် MFS2020 ခေါက်
စက် MFS3020 ခေါက်
သတ္တုတွင်ခုံ , တွင်ခုံ , တွင်ခုံစက် , Bende စက် , စာရွက်သတ္တုစက်များ, ကြိတ် Drilling စက် ,